कांग्रेसले तोक्यो आन्दोलनका कार्यक्रम ! कहिले कहाँ के- के आन्दोलन हुदैछ ? – Online National Network
कांग्रेसले तोक्यो आन्दोलनका कार्यक्रम ! कहिले कहाँ के- के आन्दोलन हुदैछ ?
१ श्रावण २०७५, मंगलवार १५:४३
काठमाडौँ, १ साउन – प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मंगलबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारका पछिल्ला निर्णय र गतिविधिका विरुद्ध ३ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
आन्दोलनका मुख्य मुद्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयक रहेको छ । सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता अनुसारको चिकित्सा विधेयक संसदमा नल्याएको विरोधमा कांग्रेसले संसद अवरोध गर्दै आएको छ।
कहिले कहाँ के-के आन्दोलन हुदैछ ?
असार ३ गते :- संघीय संसद र सातवटै प्रदेशसभाका बैठक अवरुद्ध, प्राध्यापक संघ र नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा संयुक्त जुलुस प्रदर्शन गर्ने ।
असार ५ गते :- तरुण दलको नेतृत्वमा नेतृत्वमा राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने ।
असार ६ गते :- राजधानीमा सरकारका क्रियाकलापलाई लिएर अन्तरक्रिया कार्यत्रःम गर्ने ।
असार ८ गते :- भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं कांग्रेसको संयुक्त नेतृत्वमा प्रदर्शन गर्ने ।
असार १५ गते :- ७७ जिल्लाकै सदरमुकाममा एकसाथ संयुक्त प्रदर्शन गर्ने ।
तेसैगरी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस विज्ञप्ति प्रकासित गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा आज राजधानीमा भएको प्रर्दशनमा गरिएको प्रहरी हस्तक्षेपको नेपाली कांग्रेस भत्र्सना गरेकाे छ । संविधानले प्रदत्त गरेको शान्तिपूर्ण भेला हुन र प्रर्दशन गर्न पाउने अधिकार माथिको यो हस्तक्षेपले सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख चरित्रलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको जनाएकाे छ ।
एकातर्फ डा. के.सी.को जीवन जोखिममा पर्दै गएको छ र मागको सुनुवाई नगरेर सरकार अर्कातर्फ संवेदना शून्य देखिएको जनाएकाे छ । तत्काल वार्ता गर्ने, माग पुरा गर्ने र डा. के.सी.को जीवन रक्षा गर्ने सन्दर्भमा देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको भावना बढिरहेको बेला त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर सरकार भने रोम जल्दा निरोले बासुरी बजाएको मुद्रामा देखिएको बताएकाे छ ।
अतः तत्कालै यो चरित्रलाई सुधार गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर बनोस्, नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ भनिएकाे छ ।